Siria:Toherinay ny fibodoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Marsa 2008 14:43 GMT
Yazan Badran GVO dia iray amin'ireo rohin-tserasera mamiko sady faly aho ho isan'ny Global Voices Advocacy sy ny tetikasa Lingua Arabic. Manantena aho fa samy hahita izay sahaza azy amin'ny hafatra alefako na ny Siriana mpiblaogy na ireo mpamaky azy.Yaman Salahi, mpianatra iray ao amin'ny UC Berkeley ary mpikatroka mavitrika ao amin'ny Fikambanan'ny mpianatra mitaky ny rariny ho an'ny Palestina (Students for Justice in Palestine club), dia nandefa hafatra maro momba ny fiantefan'ny fitokonana nataon'ny fikambanana tao amin'ny faritry ny campus ho fanoherana ny famonoana andro vitsy lasa izay, sy ho fanehoana firaisankina amin'ireo Palestiniana 116 maty novonoin'ny tafika Israeliana. Azonao jerena ny sary momba io fitokonana fanoherana ny famonoana io ao amin'ny Flickr-n'i Isabel. The Daily Californian'skoa dia namoaka io fitokonana fanoherana ny famonoana io tamin'ny alalan'ity sary ity sy ireto teny vitsy ireto:
Anaty hafatra iray hafa, Yaman dia nanoratra momba ny fanohanana ny fihetsiketsehana, ny fitokonana ho fanoherana famonoana iny, nataon'i HaTikva: Mpianatra ho an'Israely. Hoy izy:
Araka ny fijerin'i B'tselem kosa ny 3 mars teo (talohan'ny nitomboan'ny isan'ny maty ho ampolony mahery), dia sivily ny antsasa-manilan'ireo maty novonoin'ny tafika Israeliana. Raha ny voalazan'ny Maan News, kosa dia ankizy ny 1/3n'ireo raha kely indrindra. Etsy ankilany indray, raha ny filazan'i Tikvah azy …dia « nahafaty mpampihorohoro 110 teo i Israely ».Mazava ny hafatra tian'i Tikvah hiampita: ireo Palestiniana matin'ny tafika Israeliana, na zaza io, na olon-tsotra tsy nanam-pitaovam-piadiana, dia mpampihorohoro daholo. Lasa lavitra kokoa aza ny fijerin'i Tikvah, nataony toy ny tsy olona ireo Palestiniana hatramin'ny filazàny fa tsy maty akory izy ireo. Tsy novonoina na nampamonoina akory; Tsy isan'izay voatohina akory. Toy ny biby mpanimba, tsy maintsy nofongorina.
Mba hampiatoana ny herisetra, halaviro izy. Ekeo ny fitarainana sy fitakiana ara-drariny ataon'ireo olona maro avy any Israely sy Palestina. Tsy hahavaha io olana io akory i Etazonia; tsy hisy mpanelanelana tsy homba ny atsy na ny aroa izany, na mpitsara hamoaka didy mba hoarahan'ny olona rehetra. Raha ny vondron'olona manana mpitarika toa an-dry Tikvah dia tsy hanao na inona na inona mihitsy hanovàna izao toe-javatra izao, fa hamela irery ny fitadiavan-dàlana mankany amin'ny famahàna olana sy ny famitranam-pihavànana. Miankina amintsika ny hahafàhana mandositra ny tsindry manempotry ny tatitra avy amin'ny fanjakana ary mamorona aiga vao sy sehatra hahafahantsika mandray an-tànana ny hoavy.
Arabaina Avylavitra tonga eto indray !
Misotra amin’ny fandikana teny lava de lava. Nampiko fotsiny ilay rohy amin’ny teny anglisy sy ny tanana momba ni ity resaka ity.
Veloma indray ary e.
12 Marsa 2008, 15:53